သန့်ရှင်းသောအ — Steemit
taitano (41)in #esteem •4years ago
ကမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုစာရေးတတ်၏အဖြစ် Holi အားလုံးထဲကအလွန်အနှစ်သက်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်ပွဲတော်အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာတရား၏လူအနေဖြင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာမတ်လ (သို့မဟုတ် Falgun) ၏လတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်နွေဦးရာသီရဲ့ start ထဲမှာကျရောက်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပွဲတော်ကိုဖို့ဘယ်လိုအထူးပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူဤပွဲတော်ဘို့စောင့်ပါ။
သန့်ရှင်းသောဘုရားပှဲကငျြးပနောက်ကွယ်မှ Mr.Prahlad ကိုများစွာသောပုံပြင်ရှိပါသည်။ Mr.Prahlad ကိုတပြိုင်နက် (ဘုရားသခရာကိုပြင်းစွာကိုးကွယ်ဆည်းသူ) သူသညျဘုရားသခငျ၏အရပျ၌မိမိဖခင်ကိုးကွယ်ရန်ငြင်းဆိုအဖြစ်မိမိအဘအားဖွငျ့သေသတ်ခြင်းကိုခံရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သူ၏အဒေါ်, Holika, Mr.Prahlad ကိုရဲ့အဖေ၏အမိန့်အပေါ်သူမရင်ခွင်အတွက်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်မီးထဲမှာထိုင်ပေမယ့်သူတစ်ဦးကစစျမှနျတဲ့မွှုပျနှံခဲ့အဖြစ်သူသည်ဘုရားသခင့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအ Holika သူမသည်မီးဖြင့်ထိခိုက်ရဘယ်တော့မှရန်ဘုရားသခင်က booned ခဲ့သည်ကိုပင်အပြီးမီးရှို့။ ထိုနေ့ရက်သည် မှစ. , ဟိန္ဒူလူမျိုးကိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကျော်ကောင်းမြတ်ခြင်း၏အောင်ပွဲမှတ်မိဖို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသန့်ရှင်းသောပွဲတော်ကျင်းပနေကိုစတင်ပါ။
ရောင်စုံ Holi မတိုင်မီတစ်ဦးကတစ်ရက်, လူတွေသည်ထိုနေ့မှတ်မိဖို့ Holika ကိုမီးရှို့၏ဒဏ္ဍာရီထဲမှာညဉ့်၌တောအုပ်နှင့် Co-နောက်ချေးကိတ်မုန့်တစ်အမှိုက်ပုံမီးရှို့ရမည်။ အချို့လူများကအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအိမ်တော်ကိုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှသောဘေးဥပဒ်ကိုပါဝါကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အိမ်သို့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အာဏာကိုဆောင်ကြဉ်းမည်ဟုသောဒဏ္ဍာရီထဲမှာ Holika အတွက်တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုဝင်များ၏ sarson ubtan နှိပ်နယ်၏စွန့်ပစ်ကိုမီးရှို့၏အထူးရိုးရာဓလေ့လိုက်နာပါ။
နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ, ဆွေမျိုးသားချင်းများ, မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူအဆင်းအရောင်နှင့်ကစား။ အိမ်သူအိမ်သားများကလေးတွေအချင်းချင်းအရောင်ဖြည့်ပူဖောင်းများပစ်သို့မဟုတ် pitchakri အသုံးပြု. ဤသည်နေ့ရက်ပျော်မွေ့။
လူတိုင်း, ဖြည့်ဆည်းဖို့တခြားများ၏တံခါးများကိုသွားပွေ့ဖက်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသူတို့ရဲ့မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်ဖေါ်ပြခြင်းနဖူးမှ abeer သက်ဆိုင်ပါသည်။ အထူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစသည်တို့ကိုသကြားလုံး၏အစီအစဉ်များ, ချစ်ပ်, namkeen, dahi ရမညျ, pani puri, papadi ကဲ့သို့ဤသည်နေ့ရက်သည်ပြုလေ
#good-karma #holi #festival #love
4 years ago in #esteem by taitano (41)